Jona 10, 2018 Admin
Crypto fitsipika nanambara in Thailand
Ny Thai Fiarovana sy Exchange Commission nanambara ny tsipiriany ao amin'ny firenena cryptocurrency fitsipika. Ny fepetra dia nankatoavina tao amin'ny regulator ny fivoriana faha-7 Jona, ary iriana-kery taty aoriana volana ity.
Araka ny SEC lefitra sekretera jeneralin'ny Tipsuda Thavaramara, dia hanome fahafahana ny SEC sy Litecoin Bitcoin ho natakalo ho toy ny mpivady ara-barotra, ankoatry ny zavatra hafa.
"Ny sasany amin'ireo fepetra lehibe indrindra ampiasain'ny SEC mba hanombana cryptocurrency varotra tsiroaroa" dia ny "fitokisana sy ny marimaritra iraisana cryptocurrency liquidity."
Silicon Valley ny Top Dental Practice Manomboka manaiky Dentacoin, ny Dental Cryptocurrency
Shine Dental - Silicon Valley ny tampon'ny nify fanao, mipetraka any Fremont, California - Nanomboka fampiharana Dentacoin, vola madinika ny niomerika fitsaboana nify, ho fomba fandoavam-bola.
Shine ny mpitarika Dental Dr. Swapna Raveendranath dia niavaka tamin'ny vao haingana loka ho an'ny tsara indrindra mpitsabo nify any amin'ny faritra, taorian'ny "Best of Fremont Reader Safidim-" fifaninanana in 2016. Amin'ny fandraisana an-tanana ny vaovao ho fampiharana ny fomba fanao amin'ny cryptocurrencies, Dr. Raveendranath mikendry ny hanohy ny diany ho any "hikarakara ny marary rehetra ao amin'ny fiaraha-monina", ary hanome azy ireo amin'ny ambony kalitao, sy mora takatry ny fikarakarana nify. Ny toeram-pandrindrana dia miandrandra ny hanitatra ny fiaraha-miasa amin'ny Dentacoin sy hampiasa ny tsara indrindra vitany.
Dr. Swapna tsy mijanona ao na dia, koa rehefa mandray anjara amin'ny asa soa, miaraka amin'ny Scholar Award Program, hoe ny fandraisana an-tanana farany indrindra. Manolotra maimaim-poana-of-poana ny androm-piainany fikarakarana nify mpianatra, excelling pianarana, saingy tsy afaka ny sonia-nify ho fiantohana, noho ny antony ara-bola.
Ny lazan'ny nomerika vola dia nitarika olona maro asa fikarakarana nify hanaraka io fomba fandoavam-bola vaovao. Dental toeram-pitsaboana izay nandray cryptocurrency fandoavam-bola no nitatitra nahazo antso avy amin'ny manerana ny Etazonia. Miaraka amin'izany ao an-tsaina sy ny lohasaha mpahay teknolojia ny vahoaka, Shine Dental Mety ho lasa mora foana ny toerana voalohany ho an'ny fitsaboana nify izay manjohy manokana io mpihaino manokana.
Shine Dental mpikamban'ny Dentacoin Network niaraka tamin'ny roa amby roa-polo nify hafa fanao maneran-tany, miorina ao Etazonia, Aostralia, UK, Italia, Pays-Bas, Hongria, Bolgaria, Serbia, Malezia, Taiwan, Pakistan, Fidji, India.
$52.6M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
Blockchain News 21 Janoary 2018
Pavel Durov mangataka fampiasana ...
Next Post:Mihevitra Alemana fahatelo rehetra cryptocurrencies toy ny fampiasam-bola
Jona 20, 2018 amin'ny 3:26 AM
Jona 23, 2018 amin'ny 10:51 AM